Jly RAMAKAVELO Désiré : « Ny kolontsaina Malagasy dia rindra, lamina, fanajana ary fitiavana.» – Blaogin'i Voniary
Jly RAMAKAVELO Désiré : « Ny kolontsaina Malagasy dia rindra, lamina, fanajana ary fitiavana.»
Voniary : Ahoana ny fahitanao ny kolontsaina Malagasy amin’izao fotoana izao ?
Jly RAMAKAVELO Désiré : Tsy misy intsony izany kolontsaina Malagasy izany izao. Ny maha-firenena ny firenena iray manko dia ny kolontsainy sy ny kolom-piarahamoniny. Amintsika Malagasy, azo avondrona ao anatin’ireto zavatra roa ireto izany dia ny hasina sy ny fihavanana. Ny HASINA dia fanomezana haja sahaza azy ny olona isan’ambaratonga (zokiolona, ray aman-dreny, zoky, zandry sy ny sisa). Eny fa na dia ny fitaovana sy ny tontolo iainana aza, misy hasiny amin’ny Malagasy ka apetrany amin’ny toerana sahaza azy. Raha ohatra ny vary hanina no ataona ao anaty “pô” dia tsy mety satria tsy tokony ao no hisy azy. Izay no mahatonga ny fitenenana hoe maty hasina. Ny FIHAVANANA indray dia azo faritana amin’ny hoe tohi-aina. Io ilay rohy nolovaina avy amin’Andriamanitra mpahary, ka mila tandrovana sy hajaina. Izay no mahatonga ny Malagasy tsy tia mifandona fa mitady ny marimaritra iraisana hatrany.
Raha zohina anefa ny zava-misy amin’izao vanim-potoana diavintsika izao dia tsy iainan’ny Malagasy intsony ireo. Hany ka lasa vahoaka monina eto Madagasikara fotsiny isika fa tsy firenena Malagasy! Ny fanatontoloana koa moa etsy andaniny manafoana ny sisin-tany rehetra mba hamondrona izao tontolo izao ho iray ary ho an’ny rehetra. Vokatra izany: mibosesika eto amintsika ny vahiny ary mintrandraka ny harentsika daholo na sinoa na karana na vazaha. Mora amin’izy ireo izany satria tsy mijoro amin’ny maha-firenena antsika isika.
V: Inona ary no tokony hatao mba hamerenana ny hasin’ny maha-Malagasy?
JRD: Zavatra tsotra dia tsotra izany! Fa ny tsotra ihany anefa no sarotra ekena. Noho ireo foto-kevitra ijoroan’ny kolontsainy ireo dia olona mirindra ara-batana, ara-tsaina ary ara-panahy ny Malagasy. Manaja ny filaminan’ny zava-boahary sy ny fitsipika apetraka izy. Noho izany, tsy mifanohitra amin’ny natiora mihitsy ny Malagasy fa manaraka lojika. Azo ampiharina amin’ny fiainana andavanandro izany. Ny fitandroanao ny hasina ohatra dia manentana anao hametraka ny fitaovana tsirairay amin’ny toerana tokony hisy azy avy, ao an-tokantranonao. Izany no hampanjaka ny filaminana sy ny fahadiovana, izay mitondra filaminan-tsaina sy fiadanam-po. Firifiry moa ny Malagasy miaina ao anaty trano mikorontana. Vao miainga anefa ny fanontaniana hoe “nataonao aiza ilay zavatra teto?” dia mety hiafara amin’ny ady izany, satria ny andaniny ho voakiana fa tsy mpanaja ny lamina napetraka ary ny ankilany ho voalaza fa kizitina sy sarotiny. Noho izany, tsy tokony hitady lavitra isika fa ny Hasina sy ny fihavanana no ezahintsika tandrovana amin’ny fiainana andavanandro.
V: Aminao, ahoana ny fiainana izany maha-Malagasy izany?
JRD: Ireo efa voalazako tetsy ambony ireo. Ny mandrafitra ny olona manko dia izay hitan’ny maso, ren’ny sofina ary ataon’ny tanana. Misy tahiry avokoa ny maso, ny sofina ary ny tànana, ka ireo no mampirafitra ny saina. Samihafa ny olona marani-tsaina sy ny olona mirafi-tsaina. Ny marani-tsaina dia manam-pahaizana fotsiny fa ny mirafi-tsaina kosa dia mahay mampihatra ny fahaizana ananany eo amin’ny fiainany sy mampiasa izany. Izany no ilàna ny fampiharana sy ny asa tànana any am-pianarana. Izany koa no mahatsara ny manao raharaha rehefa ao an-trano. Izahay izao dia nozarin’ny reninay manao raharaha avokoa na lahy na vavy. Tsy fanambaniana izany fa fanazarana handray andraikitra. Raha mandinika olona mahandro vary isan’andro fotsiny ianao, tsy ahay ahandro vary mihitsy satria tsy mandray anjara ny tànana fa ny maso sy ny sofina fotsiny. Tokony ho feno foana izany ireo singa telo ireo mba hampirafitra tsara ny saina. Manaraka izany, ny fanarahana ny lamina sy fanajana ny fitsipika no mahatonga ho olom-banona. Izany rehetra izany dia ao anatin’ny maha-Malagasy avokoa.
V: Hafatra ho an’ny mpamaky ny blaogy!
JRD: Ny kolontsaina Malagasy dia: rindra, lamina, fanajana ary fitiavana. Raha ireo no voahaja dia ho tonga tompon’andraikitra ny tsirairay.
fihavanana, hasina, kolontsaina, maha-malagasy, malagasy, ramakavelo, tompon'andraikitra
Ny tena hevitry ny hoe: “Ny fianarana no lova tsara indrindra”